चीनको भ्याक्सिनले ठूलो संख्यामा ट्रायल पूरा गर्‍यो, नेपालमा कहिले सम्म आउला ? – " सुलभ खबर "
चीनको भ्याक्सिनले ठूलो संख्यामा ट्रायल पूरा गर्‍यो, नेपालमा कहिले सम्म आउला ?
काठमाडौं। चीनको व्याक्सिन विकासकर्ता कम्पनी सिनोभ्याकले ठूलो संख्यामा भ्याक्सिनेसन पूरा गरेको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीका अनुसार सिनोभ्याकले आफ्ना ९० प्रतिशत कर्मचारी र उनहिरुको परिवारलाई भ्याक्सिन दिइसकेको छ । यो भ्याक्सिनलाई जुलाइमा आकस्मिक प्रयोगको लागि स्वीकृति दिइएको थियो । कम्पनीले अहिले यो भ्याक्सिनको आकस्मिक प्रयोगसम्बन्धी जानकारी सार्वजनिक गरेको हो ।
कोरोनाभाइरसका केसहरु फेरि बढ्न थालेको अवस्थामा कम्पनीका श्रमिकहरुलाई यो भ्याक्सिन दिइएको कम्पनीले जनाएको छ । भ्याक्सिनको ट्रायल अहिले पनि जारी छ । भ्याक्सिनको आकस्मिक कार्यक्रम केही विशेष समूहका व्यक्तिहरुको लागि मात्र हो जसमा स्वासथ्य सेवाका कर्मचारी, खाद्य बजारमा काम गर्नेहरु, यातायात, ढुवानी र सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरु समावेश छन् । यो भ्याक्सिनको तेस्रो चरणको ट्रायल जारी छ र यसरी आकस्मिक प्रयोजन पनि ट्रायलकै एक अंग हो ।
कम्पनीका सिइओ यिन वेइडोंगले रोयटर्सलाई बताएअनुसार यो भ्याक्सिन २ हजार देखि २ हजार कर्मचारी र उनीहरुका परिवारलाई दिइसकिएको छ । आकस्मिक कार्यक्रम अन्तर्गत गरिएको भ्याक्सिनेसनको तथ्यांकले भोलिका दिनमा यो भ्याक्सिन सुरक्षित छ वा छैन भन्ने कुराको प्रमाण दिने उनले बताए । यो तथ्यांक रजिस्टर्ड क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकल अन्तर्गतको होइन त्यसैले भ्याक्सिनलाई स्वीकृति दिने बेला नियामक अधिकारीहरुले यी तथ्यांक हेर्ने छैनन् ।
यिनका अनुसार भ्याक्सिनको आकस्मिक कार्यक्रममा सहभागी कर्मचारी र उनका परिवारलाई भ्याक्सिनको साइड इफेक्टबारे पहिले नै बताइएको थियो । यिनले आफूले पनि यो भ्याक्सिनको डोज लिएको बताए । उनका अनुसार भ्याक्सिन दिनुभन्दा पहिले डाक्टरहरुले स्वयंसेवकहरुको स्वास्थ्यबारे पूरै जानकारी लिएका थिए । यो भ्याक्सिनको मिड स्टेज ट्रायलमा यसले थकान, ज्वरो, शरीर दुख्ने जस्ता साइड इफेक्ट ल्याउने देखिएको थियो । यी लक्षणहरु निकै हल्का थिए ।
सिनोभ्याकको भ्याक्सिनको तेस्रो चरणको ट्रायल पनि अहिले अन्तिम चरणमा पुगिसकेकोले यसको नतिजा छिटै आउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसपछि मात्र यो भ्याक्सिनले स्वीकृति पाउनेछ र विदेशमा निर्यात गर्न पाइनेछ । अहिले गरिएको आकस्मिक भ्याक्सिनेसन भने चीनको लागि मात्र हो । तेस्रो चरणको ट्रायलको नतिजा आएर भ्याक्सिनले स्वीकृति पाइसकेपछि भने यो भ्याक्सिन आम मानिसलाई दिन सकिनेछ । त्यतिबेला उत्पादन क्षमता र कम्पनीले कसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर भ्याक्सिन दिन्छ भन्ने कुराले कुन देशले पहिले भ्याक्सिन पाउँछ भन्ने निश्चित हुनेछ ।